Qareen Khabiir Khibrad u leh Dhismaha Guriyeynta | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Khabiir ku xeel dheer Guriyeynta
Dubai iyo Abu Dhabi, mid ka mid ah arrimaha sharci ahaanta ee soo noqnoqda ayaa la xidhiidha dhismaha guryaha. Maahan wax aan lagamamaarmaan ahayn in taxaddar la muujiyo markii la gorgortamayo wax hanti ah oo ku yaal magaalooyinka la soo sheegay si looga baxsado oo lagu dhejiyo nooc kasta oo sharci-darro ah.
ku soo laabashada arrimaha sharciga waxay la xiriirtaa guryaha dhismaha
Sharciga Dhismaha UAE
waayo-aragnimada waaxaha dhismaha ee kala duwan
Waxaad ubaahantahay inaad ubaahantahay qareen hantiyeed oo la isku halleyn karo ama u dooda kaliya ma ahan inaad siiso wakiilka ugufiican maxkamadaha inta lagu gudajiro khilaafaadka laakiin inaad ka baxdo muranka ka imaanshaha heshiiska guriga!
adeegga khubarada ee qareenka sharciga ah
Hagaag hadda, waad ogtahay inaad shaqaaleyso adeega khabiirada qareen ama qareen si aad uga fogaato wixii khalkhal gala, inaad dhanka sharciga ah oo aamin ah aadna keydiso lacagta mustaqbalka; laakiin sidee ku ogaan kartaa qareenka ugu fiican ee matali doona danahaaga oo kuu fidin doona adeegyo sharci oo qaraabo ah? Taasi waa inay noqotaa!
Khibraddayada xirfadeed ee arrimaha sharciga kala duwan; Waxaa lagu sameeyay taageero farsamo iyo talo injineerro, naqshadeeyeyaal, iyo sahamiyeyaal khibrad ballaaran u leh waaxaha dhismaha ee kala duwan, kuwa gaarka loo leeyahay iyo kan dadweynaha. Aqoontaas qotada dheer iyo waaya aragnimada dhammaan noocyada kala iibsiga guryaha ayaa ka shaqeynayey annaga sidii aan u bixin lahayn adeeg aan la aqbali karin oo heer sare ah oo ku saabsan astaamaha kala duwan ee aagagga ganacsiga guryaha: iibinta guryaha, isweydaarsiga, kirooyinka, horumarinta, iyo qandaraasyada dhismaha. , maalgelinta guryaha, shatiyada, iyo inta kale.
Khilaafaadka hantida guryaha way adkaan karaan, iyadoo ay jiraan dhibaatooyin badan ayna ku lug yeelan karaan dhinacyo badan Burbur kasta oo howsha ku dhaca wuxuu u horseedi karaa dhibaato dhaqaale ama wuxuu kicin karaa hiigsi dhibaatooyin kale shaqsi ahaan.
Waxaad ku kalsoonaan kartaa aqoonteenna baaxadda leh iyo waaya-aragnimada sharciyada guryaha iyo dacwad-wadaagga guud ahaan safaaradda si aan kaaga taageerno xidhitaanka heshiisyadaas hantida.
Kooxdayada Qareenada waxay bixiyaan adeegyo dhameystiran oo ku takhasusay arrimaha guryaha, sidoo kale howlgalada caalamiga ah, iyagoo la taliyaya macaamiisha shisheeye ee doonaya inay iibsadaan kana faa'iidaystaan ​​guryaha dhismaha ee dhammaan gobollada UAE.
Adeeggeenna khibradda leh wuxuu daboolayaa aagagga asaasiga ah;
Aasaasidda iyo sharciyeynta meheradaha guryaha kireeya
Soo kabashada lacag bixinta ama lacag dhigashada lacagta badan
Jebinta heshiiska (ku guul darreysiga isticmaalka heshiiska)
Dacwada dhismaha (deymanka makaanikada, cilladaha, waxqabad la'aan)
Ijaarka muddada-dheer iyo muddada-gaaban (deggane, ganacsi iyo tafaariiq)
Cusboonaysiinta heshiiska kirada
Kirada iyo dib u eegista kirada ee ganacsiga, tafaariiqda iyo guryaha la degan yahay
Kireeyaha iyo talobixiyaha kiraystaha
Kireeyaha iyo xallinta khilaafaadka iyo kiraystaha kiraystaha
Qawaaniinta sharciga iyo sharciga ee Waaxda Dhulka ee Dubai
Bonds, dammaanad qaad iyo heshiis toos ah
Khilaafaadka heshiiska dhismaha iyo horumarinta
Dib u Eeg Xawaaladda Iibka
Soo Qaadi Dokumentiyada
Kala gorgortama heshiisyada layaabka leh
Khilaafaadka xallinta iyo gar-qaadidda u dhexeeya maalgashadayaasha, horumariyeyaasha, iyo qandaraasleyaasha
Laga soo bilaabo bilowgii macaamil xaashida, kooxdeenna khaaska ah waxay si aaminnimo leh ku qaadi doontaa dhammaan tallaabooyinka, iyagoo baabi'inaya suurtagalnimada wax kasta oo mustaqbalka dhaca (khilaafaad) illaa eber. Danaha adiga, macmiilkeennu waa mudnaantayada. Xitaa marka laga hadlayo khilaafaadka, waxaad hubtaa inaad ula soo baxdid nadaafad danahaaga oo wali si adag loo aaminay. Taasi waa waxa aan qabanno. Kooxdayada khibradda badan leh ee garyaqaannada iyo dhexdhexaadiyeyaasha ayaa had iyo jeer kaa dhigaya daboolid.
Khibrad ku saabsan mashruucyada deegaanka iyo ganacsiga
Ku hubaysan aqoonta iyo khibrada dheer ee dhismaha, soo iibsiga injineernimada iyo la shaqeynta Injineerada, Architects, qorsheyaasha gobolka, iyo Sahamiyaasha; Waxaan siinnaa adeegga sharciga ugu wanaagsan maalgashadayaasha shaqsiyaadka, shirkadaha, bangiyada, iyo dillaaliyeyaasha guryaha. Waxaan sidoo kale caawimaad siinaa macaamiisha mashruucyadooda degaan iyo ganacsi, tafaariiqda, firaaqada, meelaynta isboorti.
Waxaad had iyo jeer isku halleyn kartaa talooyinkayaga caqliga iyo hufnaanta leh iyo taakuleynta dhammaan macaamillada ganacsiga guryaha.
Xallinta Istiraatiijiga ah ee Khilaafka Dhismooyinka ee Magaalada Dubai
Xallinta khilaafaadka guryaha kirada ah ee loo maro gorgortanka ama dacwadda